देवी घर्तिको घर बिगार्ने काम किन गर्दै छन् खुमन अधिकारी ? स्टेजमै सबैले देख्ने गरि यस्तो कुरा खुलासा भयो (भिडियो सहित) - Enepalese.com
देवी घर्तिको घर बिगार्ने काम किन गर्दै छन् खुमन अधिकारी ? स्टेजमै सबैले देख्ने गरि यस्तो कुरा खुलासा भयो (भिडियो सहित)
इनेप्लिज २०७५ पुष १९ गते ११:२१ मा प्रकाशित
महोत्सवममा बद्री पंगेनी, पुरुषोत्तम न्यौपाने, खुमन अधिकारी, देवी घर्ति, मन्जु पौडेल, कला लम्साल, जिवन दाहाल, मन्जु वि.क, शिवहरि ढुङ्गाना, माया गुरुङ, रविन लामिछाने, निसा पोख्रेल, रामजी पौडेल, लक्ष्मी दाहाल, टेक क्षेत्री, हास्य कलाकार तर्फ राजा राजेन्द्र ,लगायतका थुप्रै कलाकारले आफ्नो प्रस्तुति राखे का छन् । केहि कलाकारले आगामी दिनमा राख्नेछन् । यसै बीच आज हामी तपाइँलाई खुमन अधिकारी र देवी घर्तिको लाइभ दोहोरी प्रस्तुत गर्छौं, जहा खुमनले देवीको घर बिगार्ने काम गरेको गितमा प्रस्ट बुझिन्छ । तर यो केवल महोत्सबमा उपस्थित दर्शकको मनोरञ्जनको लागी गाइएको गित हो ।